हामीले मोबाइल चलायौ कि मोबाइलले हामीलाइ ? - Darsan Post
३० चैत्र २०७७, सोमबार १९:१९ Dpost118LeaveaComment on हामीले मोबाइल चलायौ कि मोबाइलले हामीलाइ ?
अनुप घिमिरे । नढाटी भन्दा हामी सबैको दैनिकी मोबाइल को घन्टीबाट सुरु हुन्छ । तपाइँ म अनि अरु कोहिको सोच्नुस त मोबाइलबाट निस्किने हानिकारक तत्त्वले त्यसबेला देखि हामीलाइ सताउन थाल्दछ । हामिले मोबाइल चलाउनु राम्रो हो तर हामीलाइ मोबाइलले चलाउदै छ आजभोली सबैजना लाई हैन र ?
पहिला मोबाइल फोन गरेर आफन्त नजिक बनाउन प्रयोग गरिन्थ्यो । आज बिश्व सबै नजिक ल्याउदछ तर हामी जुन कुरा आवश्यक हो । त्यो भन्दा धेरै अरु कुरा हेर्दछौ हामी आज मोबाइलको क्यामरा फोटो खिच्न प्रयोग गर्छौ । यो राम्रो हो तर बिचार गर्नुस त कतै कुनै बिपत पर्दा हामी सहयोग गर्नु को सट्टा भिडियो खिचेर बस्छौ । सम्झिनुस त कतै आगलागी भयो त्यहा तपाइँ एक जनाको भुमिका कति महत्त्वपुर्ण हुन्छ तर खै त त्यो सहयोग गर्नी मन ।
हामी सामाजिक सन्जालमा साथीहरू बनाउछौ तर त्यस्तो कुरा राख्छौ सामाजिक सन्जालमा कि हाम्रो परिवारको सदस्यले गाली गर्नुहुन्छ । यो देख्दा भनेर हामी परिवार सबैलाइ सामाजिक संजालमा जोड्दैनौ यो कस्तो खाल को युग हो भन्नुस त हामिले धेरै राम्म्रा काम गरेका होला तर सामाजिक कुरामा हामी धेरै अग्रसर छौनौ ।
हामीले मोबाइलमा सबै भेटाउछौ तर आफ्नो खुबी हराइरहेका हुन्छौ । सोच्नुस त तपाईं केही कुरामा अब्बल हुनुहुन्छ तर तपाइको हातमा फोन हुनु पहिला र फोन हुदा पछि को स्तिथी तपाईं बिचार गर्नुस त के एउटै छ पक्कै छैन हामिलाइ त मोबाइल ले चलाउदै छ हाम्रो हातमा मोबाइल परेपछी धेरै कुरा को प्रयोगमा कमि आयको छ । हाम्रो दैनिकी सहज बन्दै छ मोबाइल आयो । रेडियोको प्रयोग छैन । घडीको प्रयोग छैन । क्यामेराको प्रयोग कमि छ । चिट्ठीको प्रयोग त झन छैन । हाम्रा कति खेल बिर्सियौ । हामिले सोच्नुस त तर हामिले मोबाइल चलायको भने पक्कै हैन यदि हो भने कमैले मात्र होला जब हामी मोबाइल छुन्छौ । हामी त अर्कै सन्सार मा पो हुन्छौ त हामिलाई केहि लेख लेख्ने जागर हराउदछ । केही नया कुरा सिक्ने मन हुन्छ तर त्यस्को उत्तिकै मात्र पत्ता लगाउन सक्छौ । हामी के भयो कसरी भयो यो सबै पत्ता लगाउन कठिन पर्छ हामिलाई मोबाइल बाट टाढा हुन मन लाग्छ तर हुन सक्दैनौ अनि हामिलाइ मोबाइलले चलायको हैन् त असल र राम्रो कुराको लागि मोबाइल चलाउनु त राम्रो कुरा हो सोच्नुस है हाम्रा बच्चा मोबाइल नहेरी खाना खान मान्दैनन भने कस्ले के चलायो हामिले मोबाइल कि हामिलाइ मोबाइलले हामी यती अल्छी भयौ कि बिहान् उठेर हिड्नु त कता कता मोबाइल हेर्दै बस्छौ अनि हामिलाइ ब्यामको कमि हुन्छ रोग ले समात्छ । हाम्रो आँखा कमजोर हुन्छ धेरै मोबाइल हेर्नाले तर हामिलाइ यो सबै कुरा थाह हुदैन । त्यसैले यस्ता कुरामा भने ध्यान दिनुहोला हामिले मोबाइल चलाउ मोबाइल ले हामिलाइ हैन ।
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०९:३०
२ आश्विन २०७४, सोमबार १६:३४